O2 wuxuu yeelan doonaa eSIM Apple Watch | Wararka IPhone
O2's eSIM, sumadda labaad ee Movistar, waxay la jaan qaadi doontaa Apple Watch bisha Oktoobar. Haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato Apple Watch LTE, waxaad horeyba u haysataa hal ikhtiyaar oo dheeraad ah oo aad ku dooran karto taleefankaaga.
Laba sano ka hor Apple ayaa soo saartay Taxanaha Apple Watch 3 leh sheeko cusub. Waxaad horeyba u kala dooran laheyd qaabka caadiga ah ee GPS, iyo LTE. Ta dambe waxay leedahay faa iidada ay kuxirto shabakada taleefanka gacanta ee 4G iyadoon loo eegin iPhone-ka ay kuxirantahay, sidaa darteed waxaad uga tagi kartaa telefoonkaaga guriga saacadaaduna waxay kusii socon doontaa inay si buuxda ushaqeyso codadka iyo xiriirka internetka. Cabirka aaladda awgeed, sida muuqata ma jiro meel muuqaal ah oo laga soo geliyo kaarka SIM-da, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad ku diiwaangeliso kaar taleefan dalwad ah, eSIM wicitaano.
Ilaa muuqaalka moodeelkan Apple Watch ah, ma jirin wax suurtagal ah oo qandaraas lagu qaadan karo kaararka noocan ah, maxaa yeelay ficil ahaan ma jirin qalab u baahnaa. Kuwa ugu dhaqsaha badan ee falcelinta sameeyay waxay ahaayeen Vodafone iyo Orange, oo heystay kaararkan dalwaddii ee ay heli karaan macaamiishooda tan iyo markii la bilaabay Apple Watch LTE bishii Oktoobar 2017. Si aan la fahmi karin ahayn, shirkad weyn oo sida Movistar ah sidaas uma dhaqso badnayn, waxayna qaadatay dhowr bilood in la helo teknoolojiyada noocan oo kale ah ee loogu talagalay macaamiishaada.
Dhammaan LTE Apple Watch ee la iibiyey Kirismaskii 2017, tusaale ahaan, waxay ku xirnaan karaan oo keliya Vodafone iyo Orange. Hadda Movistar's OMV: O2 ayaa ku biiraya dalabkan. In kasta oo ay horey u lahayd eSIM la jaanqaadi kara iPhone iyo iPad Pro, laga bilaabo bisha soo socota waxay sidoo kale la jaan qaadi doontaa Apple Watch LTE. Noocyada kale ee taleefannada gacanta sida Pepephone ama Yoigo waxay leeyihiin eSIM, laakiin weli ma waafaqsana Apple Watch.
Tan iyo markii la bilaabay taxanaha cusub ee 5, dalabkii Apple wuu is badalay: taxanaha 4 waa laga noqday, marka hadaad rabto inaad iibsato Apple Watch cusub hada, waxaad haysataa taxanaha aan qaaliga ahayn ee 3 iyo taxanaha cusub 5, iyo labadaba ikhtiyaariyada. GPS caadi ah ama LTE oo ku xiran shabakadda mobilada.
Haddii aad ku doorato shabakad moobil ah, laga bilaabo Oktoobar waxaad awoodi doontaa inaad iska diiwaangeliso Vodafone, Orange, Movistar iyo O2.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » O2 eSIM sidoo kale loogu talagalay Apple Watch